Wararka ugu waa weyn ciyaaraha Caawa & Heshiisyada dhacay saacadihii ugu dambeeyey… + SAWIRRO – Gool FM
Wararka ugu waa weyn ciyaaraha Caawa & Heshiisyada dhacay saacadihii ugu dambeeyey… + SAWIRRO
(Yurub) 01 Luulyo 2019. Aqaristayaasheenna sharafta leh waxaan halkaan hoose idin kugu soo gudbinaynaa wararka ugu waa weyn dhanka ciyaaraha ee caawa & weliba heshiisyada illaa iyo haatan dhacay saacadihii ugu dambeeyey.
Haddii aynu ku horreyno heshiisyada dhacay saacadihii ugu dambeeyey, waxaa ka mid ah in kooxda Chelsea ay wada iibsatay Kovacic.
>- Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xaqiijisay inay si joogto ah ula saxiixatay Mateo Kovacic, kaasoo ay 40 milyan oo gini kaga soo qaateen Real Madrid, waxaana uu qalinka ugu duugay qandaraas shan sanadood ah oo kooxda ku sii hayn doona illaa sanadka 2024-ka.
>- Kooxda Southampton ayaa xaqiijisay inay si joogto ah dhankeeda ula saxiixatay ciyaaryahan Danny Ings, kaasoo ay kala wareegeen naadiga Liverpool, waxaana uu qalinka ugu duugay qandaraas saddex sanadood ah oo ku eg illaa bisha June sanadka 2022-ka.
>- Kooxda Inter Milan ayaa xaqiijisay inay naadiga Hertha Berlin kala soo saxiixatay ciyaaryahan Valentino Lazaro, kaasoo qalinka ugu duugay qandaraas afar sanadood ah oo ku eg illaa bisha June sanadka 2023-ka.
>- Craig Dawson ayaa ku biiray kooxda Watford, waxaana la warinayaa inuu adduun dhan 6 milyan oo gini kaga soo dhaqaaqay naadiga West Brom, isagoo Watford qalinka ugu duugay heshiis afar sanadood ah oo ku eg sanadka 2023-ka.
>- Kooxda Borussia Dortmund ayaa xaqiijisay inay la saxiixatay Mateu Morey, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga Barcelona, waxaana uu qalinka ugu duugay heshiis shan sanadood ah oo kooxda reer Jarmal ku sii hayn doona illaa sanadka 2024-ka.
>- Southampton ayaa xaqiijisay inay Che Adams kala soo saxiixatay kooxda Birmingham City, waxa ay ku soo qaateen heshiis aan qiimihiisa la shaacin, isagoo qalinka ugu duugay qandaraas shan sanadood ah.
>- Aston Villa ayaa xaqiijisay inay la soo saxiixatay Matt Target, kaasoo qiimo aan la shaacin ay uga soo qaateen kooxda Southampton.
>- Jack Harrison ayaa heshiis hal sano ah u kordhiyey Manchester City, kaasoo kooxda ku sii hayn doona illaa sanadka 2022-ka, waxaana Man City ay sidoo kale xaqiijisay inay Jack Harrison xilli ciyaareedka soo socda ee 2019-20 amaah ugu dirtay Naadiga Leeds United.
>- Kooxda Zenit Saint Petersburg ayaa xaqiijisay in heshiiskii Claudio Marchisio si wadajir ah loo joojiyey.
>- War hadda soo dhacay oo ay warinayso shabakadda Sky Sports ayaa sheegaya in kooxda Arsenal ay dalab 40 milyan oo gini ah ka gudbisay weeraryahanka Crystal Palace ee Wilfried Zaha, isla markaana ciyaaryahanku haatan sugayo inuu dhaqaaqo.
RASMI: Claudio Marchisio oo ka tagay kooxda Zenit St Petersburg